မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: ကလေးတွေသာမြင်နိုင်တဲ့ လှို့ဝှက်စာသားနဲ့ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်...
Posted by mabaydar at 4:01 PM
Thank you for sharing Nyi Ma Lay...Luv you!
Thank you for your kind comment... Luv you 2
5/30/2013 7:50 AM
sharing လုပ်တာ ကျေးဇူးပါ မဗေဒါရယ်... ကိုးရီးယားကား review တွေကိုလည်းအမြဲလာဖတ်ပါတယ် ၊
ဆုမြတ်ရဲ့ အားဆေးက စွမ်းတယ်... နောက်ထပ်ဆက်ရေးချင်စိတ်တွေဖြစ်သွားပြီ.... ခရီးသွားပိုစ့်ရေးမလို့ အပျင်းကြီးနေတာ... ခုတော့ ရေးရမယ်.... ဒီပိုစ့်က အားဆေးသိပ်မရှိတော့ အားတောင်ငယ်နေတာ.... :D
6/03/2013 3:08 PM
Sure... What is that campaign about? what do I need to prepare?
မဗေဒါရဲ့ခရီးသွားပိုစ့်တွေကိုဖတ်ရတာတကယ်အားရတယ်..။ဖူးကတ် တုန်းကဆိုလည်း ကိုယ်ပါလိုက်သွားသလိုပဲခံစားရတယ်...။။ ခရီးသွားဖို့အစီစဉ်ရှိလို့သွားခါနီးကျရင် တစ်ခေါက်ထပ်ဖတ်ဦးမယ် မမရယ်း)
6/06/2013 8:59 AM
ဟီး ဟီး ဖူးကတ် ပိုစ့်က ခုထက်ထိ မပြီးသေးတာ အားတောင်နာတယ်... ခုမှတော့ မေ့တောင် မေ့စပြုနေပြီ... သြစီတော့ မမေ့ခင် အရင် ပြီးအောင်ရေးလိုက်အုံးမယ်....
6/06/2013 11:48 AM